Ireo izay maty ao amin'i Kristy no tonga avy any am-pasana any ny anjomara. Izy ireo no mba mampiova ny endriny amintsika velona.
Ny fanovana ho tena mafy. Tsy hisy "ao fa vetivety, toy ny indray mipi-maso." Fototra voalaza ao amin'ny lahatsoratra iray izao "ny atomo" izay midika ho "saratsarahina ny fotoana", ao anatin'ny fotoana fohy (a masaka ofthalmú) "haingana kokoa noho ny maso dia afaka akimpiko kely."
Isika izay mino sy manao ny fotoana ny fampakarana mitranga, miaraka amin 'izay hitsangana ovana. Ny fanodinana hitranga "any fa vetivety, toy ny indray mipi-maso, maneno ny trompetra farany." Manoratra momba izany i Paoly, ary mamaky isika ao amin'ny KJV, ny 1 Korintianina. 15: 51-53:
"Indro, lazaiko aminareo ny zava-miafina: isika, fa tsy hodi-mandry avokoa isika rehetra hovana, fa vetivety, ao ny indray mipi-maso maneno ny trompetra farany. Fa hotsofina ny trompetra, ny maty dia hitsangana, ary isika dia hiova. Noho izany dia tsy maintsy akanjo lo mihitsy ny tsi-fahalòvana, ary ity mety maty ity dia tsy maintsy akanjo amin'ny tsy fahafatesana. "
Rehefa maneno ny trompetra farany, dia ny tsato-kazo famantarana fa ny maty dia ho hatsangana. Ireo izay maty ao amin'i Kristy no tonga avy any am-pasana any ny anjomara. Izy ireo no mba mampiova ny endriny amintsika velona.
Ny fanovana ho tena mafy. Ho hitranga "ao fa vetivety, toy ny indray mipi-maso." Fototra voalaza ao amin'ny lahatsoratra iray izao "ny atomo" izay midika ho "saratsarahina ny fotoana", ao anatin'ny fotoana fohy (a masaka ofthalmú) "haingana kokoa noho ny maso dia afaka akimpiko kely."
Ny eto an-tany nitoetra
"Io lo" dia manondro ireo izay maty, raha mbola "maty" dia manondro ireo izay miaina. ? 2 Kor. 5: 1-5 dia manome ny valiny:
"Nefa fantatsika raha ny lay izay no eto an-tany fonenana rava, dia manana izay voarafitr'Andriamanitra isika avy amin 'Andriamanitra, dia trano tsy nataon-tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Ao anatin'ity isika misento koa, ary maniry mba ho rakotra ny fonenanao izay any an-danitra, fa indray mandeha isika akanjo izany isika, fa tsy ho hita mitanjaka. Fa isika izay amin'izao lay sighs sy mavesatra entana, tsy hoe satria tiantsika ny ho hendahana, fa hitafy ny, ka ny mety maty mba ho levona amin'ny fiainana. Fa izay efa namboatra antsika ho amin'izany dia Andriamanitra, ho antoka, koa efa nanome antsika ny Fanahy. "
Ny trano-lay izany dia toa tsy manan-kery, ny vonjimaika, nitoetra vonjimaika. Ao anatin'ny fiainana feno fitsapana isika, dia misento sy maniry mafy ho an'ny andro izany tsy ho ela ho ao anatiny Andriamanitra, rehefa mametraka ny farany ho amin'ny fiainana eto, ary hampitoeriko ny fanjakany.
Fiovana ihany koa ny voalaza ao amin'ny Fil. 3: 20-21
"Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, ary avy any koa miandry ny Mpamonjy, ny Tompo Jesoa Kristy, izay hanova ny tenan'ny fietren-tenantsika, fa izy ireo dia ho tahaka ny amin'ny tenan'ny voninahiny, araka ny hery izay zavatra hafa tratry ny handresy ny zava-drehetra."
Sighs isika maniry ny hitafy lamba vatana selestialy, dia ny voninahitry ny ny vatan'i Jesoa. Ny fanantenana dia ny tsy manana ny esory ary fa hahazo överkläda anay tamin'ny voninahitry ny vatana. Ary izany indrindra no nomanin'Andriamanitra ho antsika. Rehefa olona masina mitafy ny voninahitry ny tena, dia ireo izay tsy mpino mba tsy manan-kitafy, ary hitondra ny henatra. Satria olom-pirenena any an-danitra isika, ny amin'ny tenan'ny voninahiny, ny akanjo-pirenena izay tsy maintsy hitondra ao amin'ny tontolo any an-danitra.
Vecka 30, måndag 26 juli 2021 kl. 20:49